Pirates yeFrontier Reach: mutambo wevhidhiyo "uchadzika" paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uri fan of simulators yendege uye nendege yemhepo, ipapo iwe uchazoda kuziva iyi nyowani zita rinonzi Pirates dzeFrontier Reach. Mutambo wevhidhiyo unovimbisa uyo uchave unotevera kuratidzika muSteam Kutanga Kuwana uye izvo zvangosvika paLinux zviri pamutemo.
Pirates yeFrontier Reach mutambo wevhidhiyo we Kurwa Kwemhepo & Arcade yakagadzirirwa muFrontier's Reach zvakasikwa. Ndokunge, zvakasikwa umo vanhu vakatora nhanho dzekutanga munyeredzi uye vatanga kumisikidza makoloni kumazana epasi munzvimbo dzekunze. Ehezve, ivo vanozove nyika nyowani kuti vaongorore nehuzhinji hwehutsinye ...
Vatambi vanofanirwa kubata nematambudziko akawanda pane anotonga e murwi wehondo yeCorsair zvikepe zveRepublic of the Frontier Worlds kudzivirira vanhu vetsika nemitauro kubva pasimba reConfederation of Sunshine Mapuraneti.
Iwe unotoziva kuti Pirates yeFrontier's Reach yakatanga kuburitswa munaNovember 2020, asi Linux rutsigiro Haisati yasvika kusvika zvino, kusvika kupera kwaNdira 2021 painenge yatowanikwa kune vese vashandisi veLinux. Kunyangwe izvo, ichiri mune imwe nhanho yekutanga, iine zvinhu zvakawanda zvekuita zvinoenderana nemugwagwa, saka shanduko huru dziri kuuya.
Semuenzaniso, a hombe kuvandudza yayo AI system, mamishinari ekuwedzera, Steam Workshop kusangana, kuongororwa kwenyaya yezvinyorwa neepisodic vhiki nevhiki mishoni, uye zvimwe zvakawanda ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Pirates yeFrontier Reach: mutambo wevhidhiyo "uchadzika" paLinux